त्यसैले आज हामी "YouTube" मा सबैभन्दा सदस्यहरू छन् जो बारेमा कुरा हुनेछ। साथै, हामी तपाईंलाई अझै पनि सही सकेसम्म धेरै दर्शकहरु आकर्षित गर्न आफ्नो "टेप" कायम सिक्न। त्यसैले हाम्रो वर्तमान विषय बुझ्न तपाईं सुरु गरौँ।
उसोभए, तपाईं "YouTube" मा सबैभन्दा सदस्यहरू छन् जो सोच्न भने, वा तपाईं आफ्नो च्यानल ठूलो लोकप्रियता सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफैलाई एक संगीतकार रूपमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। को सांगीतिक क्षमता मा प्रतिभा देखेको छु जो मान्छे, अक्सर अवैतनिक भिडियो रेकर्ड र तिनीहरूलाई फैलियो।
यदि प्रयोगकर्ता आफ्नो भिडियो रुचि, तिनीहरूले तपाईंलाई सदस्यता हुनेछ। उदाहरणका लागि, Lindsey स्टर्लिंग गरे। त्यो भाइलिन खेले र danced। आफ्नो सबै भिडियोहरू केटी च्यानल मा विशेष गरी फैलाउन थाले। अब यो सबै दुनिया भर ज्ञात छ। यसैले, संगीतकार स्कोर सबै सम्भावनाहरू छन् उच्चतम नम्बर "YouTube" ग्राहकहरूले। तर सबै छ। अरू के इच्छित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ?
तपाईं अझै पनि जसले तपाईंलाई प्रयोगकर्ता आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ रूपमा साथै, "YouTube" मा सबैभन्दा सदस्यहरू छन् बारेमा लाग्छ? त्यसपछि तपाईं कम्प्युटर ग्राफिक्स को क्षेत्र मा आफैलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ तपाईं सानो कार्टून र अन्य रोचक र कहिलेकाहीं हास्यास्पद भिडियो सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छन। सफल भने, तपाईं आफ्नो भविष्य काम बारे दर्शक को एकदम धेरै, साथै इच्छा हुनेछ।
दुर्भाग्यवश, यो विकल्प सबैका लागि छैन। सबै पछि, तपाईं आफ्नै उद्देश्यका लागि, जस्तै "भूतप्रेत" डब रूपमा पहिले नै ज्ञात रोलर्स प्रयोग वा एक फरक फारममा कम्प्युटरमा पुन: सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। हास्य को एक अर्थमा सबैलाई सक्दैन। परिणाम हासिल गर्न राम्रो पसिना छ।
एउटा उत्तर "YouTube" मा सबैभन्दा सदस्यहरू छन् जो को प्रश्न गर्न सकिन्छ। यो हास्यास्पद छ, तर यो जसले कार्यशालाओं को सबै किसिमका लेख्न प्रयोगकर्ता छ। अब संसारको एक दृश्य सहायता चाहिन्छ भनेर धेरै गतिविधिहरु, सोख र घरेलू घरधन्दा छन्।
हरेक आधुनिक मानिस एक पुस्तक पढ्न र तस्वीर हेर्न तयार छ। यो कहिलेकाहीं मदत गर्दैन। भिडियो ट्यूटोरियल - त्यसैले, मान्छे एक वैकल्पिक खोज्न थाल्छन्। यी भिडियो चाँडै दृश्यहरु र त्यसैले सदस्यहरू एक ठूलो रकम प्राप्त छन्।
तपाईं राम्रो weaves वा Embroidering छन्? तपाईं शिल्प के? त्यसपछि यसको बारेमा धेरै भिडियो लेख्न र त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्। यदि प्रयोगकर्ताहरूले विचार रुचि हो, तिनीहरूले मात्र नियमित आगंतुकों लेखिएको हुनेछ, तर पनि अझै मानिसहरूलाई आफ्नो प्रदर्शन मनन गर्न चाहनुहुन्छ कि विचार को एक जोडी बसोबास गर्छन्। तपाईं चाँडै YouTube मा अनुयायीहरूलाई पाउन कसरी थाहा छैन? त्यसपछि एक रोचक भिडियो ट्यूटोरियल बनाउन प्रयास गर्नुहोस्।
र यहाँ अर्को राम्रो रोचक परिदृश्य हो। तपाईं महिला दर्शक बीच "YouTube" मा सबैभन्दा सदस्यहरू गर्नेहरूलाई सोध्न भने, यो सबै भन्दा लोकप्रिय जो व्यञ्जनहरु वर्णन भिडियो, हो कि उल्लेख गर्न सकिन्छ।
धेरै राम्रो, को पाठ्यक्रम, हो - कुरा s किताबहरु कुक छ। तर कहिले काँही समय एक विशेष नुस्खा, कुनै खोज्न प्रयास, तर मनमोहक हुनेछ यस्ता कुराहरू को कुरा गर्न। त्यसपछि सहायता videoretsepty आउँछन्।
तिनीहरूले जवान Housewives र अनुभवी महिलाहरु लोकप्रिय छन्। तपाईं पाक प्रतिभा छ भने त, त्यसपछि "YouTube" मा ध्यान बिना तपाईं बायाँ गरिने छैन। खाना पकाउने मा धेरै भिडियो रेकर्ड स्वादिष्ट व्यञ्जन, क्लिप माउन्ट, र त्यसपछि आफ्नो च्यानल मा राख्नु। र के हुन्छ हेर्नुहोस्। उच्च सम्भावना हामी एक गृहिणी र अवैतनिक नियमित नयाँ व्यञ्जन लागि खोज मा तपाईंले भ्रमण हुनेछ स्वादिष्ट कुरा पकाउन भनेर भन्न सकिन्छ। महत्वपूर्ण कुरा, भिडियो अपडेट गर्न नभुल्नु छैन। अधिक अक्सर राम्रो। बारेमा पनि छैन भूल गर्नु हुँदैन।
"हामी videoobzorschikov": हरेक समय कसैले प्रायजसो, यी मानिसहरू जस्तै केहि सुन्न "YouTube" मा सबैभन्दा सदस्यहरू छन् जो बारेमा एक प्रश्न सोध्छन्। यो कस्तो अर्थ राख्छ? गरेको बुझ्न प्रयास गरौं।
त्यसैले, हरेक पटक साईट प्रयोगकर्ता आफ्नो च्यानल प्रचार गर्ने प्रयासहरू, यो सधैं केही रोचक र उपयोगी सिंहावलोकन बनाउँछ। यो नयाँ प्रविधि, ग्याजेट वा कार्यक्रम बारे भिडियो हुन सक्छ।
सुविधाहरू बारे बताउन वा तिनीहरूलाई देखाउन। संवाददाता भिडियो को स्थापना पछि आफ्नो च्यानल मा पोस्ट र साथीहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस्। नियम, यो यी कदम छ र पदोन्नति च्यानलहरू सुरु गर्नुहोस्। समीक्षा जस्तै? को आगंतुकों लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। कुनै? त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
सबैभन्दा यहाँ लोकप्रिय, obzorschiki छन् विशेष त्रास मा, भिडियो बित्दै जाँदा खेल मा गोली। विशेष गरी खेलौना लामो छ भने। त्यसपछि तपाईं उनको लामो समय को लागि, भाग मा, लाग्न सक्छ आफ्नो कार्यहरू र विचार मा टिप्पणी गर्न समानान्तर। अब एक दर्शक आकर्षित गर्न सक्षम छ के भन्ने - खेल मा सम्पूर्ण पूर्ण गाइड मा तह सानो अंश।
अस्तित्व को कुनै पनि इन्डी हरर द्वारा पहिलो चलचित्र लेख्न - पनि, तपाईं कसरी सदस्यहरू धोखा "YouTube" छिटो र इमानदार, तपाईं एक बरु रोचक पालो सुरु गर्न सक्छन् सोच्न भने। सामान्यतया, हास्यास्पद वचनहरू कि डरलाग्दो, धेरै मजा दर्शक, obzorschiki बोल्न। यो प्रयास र सबै यो देखिन्छ रूपमा गाह्रो छैन भनेर हेर्न हुनेछ। दृश्य संख्या सबैभन्दा ठूलो हुन सक्छ। तपाईं के मान्छे अब रुचि थाहा छ भने "YouTube" ग्राहकहरूले पाउन सजिलो छ।
एक विशेष कार्यक्रम - तथापि, तपाईं बिल्कुल लोकप्रिय बन्न प्रतीक्षा गर्न सक्छन् भने, यो सम्भव अर्को राम्रो चतुर तरिका प्रयोग छ।
दुर्भाग्यवश, यो विधि महत्वपूर्ण कमियां एक नम्बर छ। पहिलो - यो गरिब गुण हो। हो, मान्छे स्वतः तपाईंलाई सदस्यता, तर त्यहाँ तिनीहरूले बस आफ्नो च्यानलमा दिन सम्म सजिलो कुनै ग्यारेन्टी छ। को नाली तल र सबै - तिनीहरूलाई चासोको विषय छैन।
दोस्रो drawback - यो एक विशाल जोखिम छ। धोखा लागि कार्यक्रम प्रयोग पछि, तपाईंले महत्त्वपूर्ण डाटा प्रविष्ट गर्न छ। अन्त मा, तपाईं सिस्टम मा भाइरस राख्न सक्छ, र सामान्य मा खाता बिना रहन। यो केवल चोरी। त्यसैले तपाईं, YouTube मा सबै भन्दा सदस्यहरू गर्नेहरूलाई बीच हुन राम्ररी थप इमानदार तरिका चयन गर्न चाहनुहुन्छ भने।
YouTube साइटमा पहुँच गर्न असमर्थ: जडान रिसेट
TBT - यो के र यो प्रयोग किन छ हो?
मेलोन सामूहिक किसान। खेती, हेरविचार, परिपक्वताको समय
छुट्टी मा सावधानीहरु।
एक ढोका कब्जा कसरी झुन्डियो?
म गर्भावस्था बेला चक्की 'Paracetamol' लिनुपर्छ: को औषधिको खुराक र साइड इफेक्ट
कन्फिगर र सिफारिसहरू, को निर्देशन: कसरी वाइफाइ ल्यापटप विन्डोज 8 वितरण गर्न
कार्यक्रम मार्फत नक्कली फाइलहरू फेला
उपन्यास "Dubrovsky" एक .Pushkina मा एक निबंध: मानव व्यक्तिको सुरक्षा